ထိစိမ့် Technologies ကအတွက်ခေါင်းဆောင်မှု၏ 50 ကျော်နှစ်များနှင့်အတူ,
Bry-Air ကိုထုတ်ကုန်အားလုံးသင့်ရဲ့အစိုဓာတ်ကို / စိုထိုင်းဆထိန်းချုပ်မှု, ချေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး, အနံ့ဖယ်ရှားရေး, ပလတ်စတစ်ခြောက်သွေ့, သယ်ဆောင်နှင့်ရောနှော, မှို dehumidification မြင့်မားသောအပူချိန်အပူပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် energysmart ဖို့ကူညီနေတဲ့ထိစိမ့်သုံးပြီးစွန့်ပစ်အပူသုံးပြီးအေး၏ကျယ်ပြန့ရှိပါတယ်။
Bry-Air ကိုကာလဖြစ်ပါသည် dehumidifiers များ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူး
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများတွင်ကျွမ်းကျင်မှု၏ 50 နှစျကျြောနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ dehumidifiers ရောင်းချ, ဆေးဝါး, အစားအသောက်, လီသီယမ်ဘက်ထရီကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ကာကွယ်ရေး, ပါဝါ, ဓာတုပစ္စည်း, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, သားရေနှင့်များစွာသောပိုပြီးများကဲ့သို့အမျိုးမျိုးကွဲပြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအနှံ့အရှုပ်ထွေးဆုံးစိုထိုင်းဆ / အစိုဓာတ်ကိုထိန်းချုပ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့ဖြေရှင်းချက်ပေး , Bry-Air ကိုထုတ်ကုန်အဆက်မပြတ် output ကို, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ငွေတန်ဖိုး outperforming, အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်လူသိများကြသည်။
Bry-Air ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများအနှံ့တိကျတဲ့ဖောက်သည်များနှင့်လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့ dehumidification စနစ်များကိုစိတ်ကြိုက်အတွက်အထူးပြုသည်။ အဆိုပါ Bry-Air ကို dehumidifiers အီးသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် EcoDry ရဟတ်ထည့်သွင်း။
170 CMH မှစ. 3000 မှ CMH, CNC အမှုန့် coated finish ကိုအတူလုပ်ကြံ
10000 ကနေ CMH ထုံးစံဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်အဘို့, CMH 100000+ မှ
2500 CMH မှစ. 25000 CMH, stainless ပြွန်မူဘောင်၏အထူးလုပ်ကြံလီဆယ်မှုများမှ
600 CMH မှစ. 1800 CMH ဖို့နဲ့ခြောက်သွေ့မျိုးစပါးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များအဘို့, အထက်အင်ဂျင်နီယာ